Madaxweynaha K/galbeed oo xarigga ka jaraya guriga martida ee Xudur+sawirro – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Abdihakim Sharif Ali / June 15, 2020 June 15, 2020
Xudur(SONNA) Munaasabad lagu boogaadinayey mashaariicda hormarineed ee laga fuliyey degmada xuddur ee xarunta gobolka Bokool looguna mahadcelinayay madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen ayaa lagu qabtay halkaasi.
Mashaariicda lagu horumarinayo adeegyada bulshada waxaa kamid ah xarumaha degmada,Maxkamadda,Suuqa Xoolaha,xarunta nabad sugidda iyo goobo kale,kuwaasi oo xiligan muhiim u ah howlaha gobolka.
Madaxweynaha Dowlad Gobleedka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Laftagareen) iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maalmahan ku sugnaa Xudur ayaa kormeer ku sameeyay mashaariic horumarineed oo lagu hirgeliyaya magaaladaasi,waxaana maamulk agobolka Bokool uu si weyn u soo dhaweeyey talaabadaasi uu qaaday maamulka Koonfur Galbeed,iyagoo sogootin u sameeyey.
Intii ay socotay xaflada waxa aad loo amaanay waxqabadka maamulka koofur galbeed gaar ahaan mashaariicda hormarineed ee laga fuliyey degmada Xuddur oo madaxweyne Cabdicasiis Laftagareen xariga kajaray intii uu ku sugnaa magaalada Xuddur.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koofur Galbeed ayaa lagu wadaa maanta inuu xarigga ka jaro guriga martida ee magaalada Xuddur,kaasi oo dhawaan la dhisay.
Gobolka Bokool ayaa kamid ah deegaanada ka soo kabanaya dhibaatooyinkii ka soo gaaray falalka xun ee maleeshiyada Alshabaab,iyadoo dhanka kale uu halkaasi ka socdo howlgal ballaaran oo ku aadan sidii deegaanada maqan looga xoreyn lahaa koxda Lashabaab.
Maxamed Xasan Cabdiraxmaan Xudur